काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नो भूमीको रक्षा गर्न सक्षम रहेको बताएका छन । कालापानी र लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा नआएको भन्ने सामाजिक गुनासो बढेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्...
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १५ विधाका उत्कृष्ठ करदातालाई सम्मान गरेको छ । ८ औं कर दिवसको अवसर पारेर गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बढी कर तिर्ने विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स...
दाङ । प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका दुई कार्यकर्तालाई दाङबाट पक्राउ गरेको छ । दाङ बबई गाउँपालिकाका एरिया इन्चार्ज निमबहादुर डाँगी शनिबार १ः१५ बजेतिर बबई–५ ट्वाङखोलाबाट पक्राउ परेका हुन् ।...
एजेन्सी । इरानका नेता अयातोल्लाह अली खुमेनीले यहुदीलाई नष्ट गर्न नचाहेको बताउँदै सबै धर्मका मानिसले इजरायलको भविष्य तय गर्नुपर्ने जनाएका छन् । सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिपछि इरानले इजरायललाई मान्य...
एजेन्सी । अमेरिकाको नाकाबन्दीसँगै समस्यामा रहँदै आएको इरानमा पेट्रोलको राशन तय गरिनुका साथै मूल्यवृद्धि गरिएपछि सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार पेट्रोलमा सब्सीडी कम गर्नुका साथै मूल्य क...
मुस्ताङ । राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोम–कोरला सडक तीन दिन बन्द गरिने भएको छ । जोमसोम–कोरला निर्माणाधीन सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने समरको भिरदेखि झोखोलासम्मको ...
डेनिस नागरिकको खुम्बु क्षेत्रमा मृत्यु
सोलुखुम्बु । खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणमा आएका एक विदेशी नागरिकको लडेर मृत्यु भएको छ । डेनमार्कबाट खुम्बु भ्रमणमा आएका ३५ वर्षीय पुरुष आन्ड्रेस ब्याक पेडर्सेनको शुक्रबार मृत्यु भएको हो । आइसल्याण्ड पिक ...
इस्लामाबाद । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापना गर्न भारत र पाकिस्तानबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिएका छन्। दक्षिण एसिया, मध्य पूर्वमा शान्ति र विकास...
आज ! एका बिहानै अनिष्ट हुनु रहेछ क्यारे पोथी बाँसेछ । त्यसैले होला मेरो घरमा कोलाहल मच्चिरहेछ अशान्तिले जरा हालेछ । दौडिरहेछन घरका मान्छेहरू उताबाट उता उताबाट यता । के के न भाको जस्...
हतियार सहित पक्राउ परेका तरुण नगरसभापतिको रिहाईकाे माग गर्दै बाँके बन्द
बाँके । हतियारसहित पक्राउ परेका नेपालगन्ज नगर सभापति सन्दीपजंग शाहको रिहाईको माग गर्दै नेपाल तरुण दल बाँकेले आज बन्दको आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण बाँकेको जनजीवन प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक याता...
अमेरिकामा नेपाली मूलका बैज्ञानिक डा. झा ‘सर्वोच्च आविष्कारक पुरस्कार २०१९ बाट सम्मानित
डिसी । नेपाल जनकपुर धनुषा देवदिहा घर भै हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता बैज्ञानिक डा सतिश चन्द्र झा 'सर्वोच्च आविष्कारक २०१९ पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । उनि इन्टेल सँस्थामा ...
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई बाहेक ६ जनाको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका ६ सल्लाहकारको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका विष्णु रिमाल र राजन भट्टराइ बाहेक अन्यको राजीनामा स्वीकृत भएको जनाइएको छ । प्रेस सल्लाहकार ...
नेकपा शीर्ष नेताहरु बालुवाटारमा, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुरु भएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा लागेका ओलीले सोबारे अन्तिम नि...
हङकङमा झडपको क्रममा ७० वर्षीय वृद्धको मृत्यु
एजेन्सी । हङकङमा प्रदर्शनकारी र सरकार समर्थकको झडपका क्रममा७० वर्षीय एक वृद्धको हिजो(बिहीबार) मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार सफाइको काममा संलग्न ती व्यक्तिको कामबाट बाहिर खाना खान निस्केको बेलामा...
एजेन्सी । प्रख्यात एवम् सम्मानित पार्श्व गायिका लता मंगेशकरको मृत्युको भ्रामक समाचार यतिबेला फेसबुक, ट्विटरलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । तर, उनी जीवित रहेको र उनको अवस्था सुधारोन्मु...
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद आज स्वदेश फर्किंदै
काठमाडौं । आफ्नो चार दिने नेपालको राजकीय भ्रमण सकेर बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद आज(शुक्रबार) स्वदेश फर्किँदैछन् । मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद आज स्वदेश फर्किनुअघि चन्द्...
काठमाडौं । केही समयअघि भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रलाई भारतमा देखाइएको थियो । भारतको उक्त नक्साको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा चीनले आफ्नो प्रति...
काठमाडौं । दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक रकालापानीको नेपाली भू–भाग भारतीय भूमिमा राख्दै भारतले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा चौतर्फि विरोध भएको छ । देशको सुरक्षाको जिम्मा पाएका...
काठमाडौं । युरोपेली मुलुक फ्रान्सको पेरिसमा जारी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को ४० औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजम...
युवा संघले टुङ्ग्यायो एकता, यी हुन् जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक (सूचीसहित)
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सबै जिल्लामा संयोजक र सहसंयोजक तोकेको छ । कात्तिक १६ गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै युवा सङ्घले जिल्ला स...